Hindiya ma waxay Kashmiir ku riixday meel aan ka soo noqosho lahayn? - BBC News Somali
Hindiya ma waxay Kashmiir ku riixday meel aan ka soo noqosho lahayn?
Image caption Kashmiir ayuu qalalaase ka jiray ilaa isbuucii hore
Dhinaca ay Hindiya maamusho ee gobolka Kashmiir wuxuu ilaa isbuucii lasoo dhaafay ku jiray go'doon ka dib markii ay dowladda Hindiya meesha ka saartay qodobka dastuuriga ah ee tirsigiisu yahay 370, kaasoo gobolka siinayay aqoonsi khaas ah. Sumantra Bose oo ah barfasoor wax ka dhingta mac-hadka London School of Economics (LSE), ayaa sharraxeysa go'aankaas.
Dabayqaada bisha Oktober, Jammu iyo Kashmiir waxay noqon doonaan gobollo aan ismaamulin oo ka tirsan Hindiya.
Isbuucii lasoo dhaafay, baarlamaanka Hindiya ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay go'aanka ay dowladda ismaamulkii gobolkaas ugu kala qeybisay labo dhul oo mideysan, oo kala ah Jammu iyo Kashmir oo hal isku ah iyo Ladakh.
Deegaannada loo aqoonsado inay yihiin dhul midow la ah Hindiya waxay yeelanayaan xuquuq dhinaca ismaamulka ah oo aad uga yar gobollada kale ee federaalka Hindiya.
Wuxuu sidoo kale maamulkoodu si toos ah uga imaanayaa xukuumadda Delhi.
Dad badan oo Kashmir lagu laayay iyo bandaw lagu soo rogay
Dibedbaxyada Kashmiir oo sii xoogeysanaya
Image caption Dadka reer Kashmiir ayaa sheega inay ku jiraan xabsi kor ka bannaan
Kashmiir waxaa u badan muslimiin waxaana ku nool dad tiradooda lagu qiyaaso 8 malyan oo ruux, halka Jammu oo dadka ku nool ay hinduu u badan yihiin tiradooda lagu qiyaasay 6 malyan oo ruux.
Ladakh oo ah gobolka saddexaad ee dhawaan la abuuray waxaa isagana ku nool 300,000 oo isugu jira tirooyin isla eg oo kala ah muslimiin iyo budiiste.
Dadka Hinduuga ah ayaa muddo 70 sano ah u xusul duubayay sidii meesha looga saari lahaa qodobka 370 ee dastuurka, kaasoo toddobaadkii hore laga takhalusay.
Ra'iisul wasaare Narendra Modi iyo wasiirka guriyeynta ee dalkaas Amit Shah ayaa wada saxiixay go'aanka lagu baddalay nidaamkii maamul ee Kashmiir iyo Jammu.
Mid intiisa badan astaan ah
Image caption Ciidamada Hindiya ayaa howlgallo ka waday gobolka
Aqoonsiga khaaska ah ee gobolkan ayaa intiisa badan horay loogu baabi'iyay isbadallo ay dowladdu sameysay sanadihii u dhaxeysay 1950-kii ilaa 1960-kii.
Ka dib bartamihii 1960-kii waxyaabaha ka haray qodobka 370 waxay ahaayeen kuwo astaan iska ah oo aan muhiimad weyn lahayn.
Waxa ugu weyn ee ka shaqeynayay wuxuu ahaa faqradda 35 ee qaraarka oo dhigeysa in qof aan gobolka u dhalanin uusan dhul ama hanti kale ka iibsan karin halkaas.
Tallaabada uu hadda qaaday xisbiga talada haya ee (BJP) ayaa wax badan ka baddali doonta hannaankii maamul ee gobolka ay lahaanshihiisa ku muransan yihiin Hindiya iyo Pakistan.
Mr Modi ayaa dadka ku dhaqan gobolkan u ballan qaaday inay gaari doonaan horumar ballaaran, wuxuuna sheegay in dhawaan la qaban doono doorasho lagu sharciyeynayo maamullada Kashmir iyo Jammu, halka Ladakh uu dhisnaan doono sharci la'aan.